Uthanda oshade naye ukungathembeki akazange ngisho bacabange. Kodwa bewazi yini ukuthi kukhona othandana naye, kukhona izinto kancane abangenacala ezingakuxhumanisa endleleni ezishelelayo zokungethembeki? Sibala nabo salolu shicilelo.
Ukudlala emsebenzini noma kwenye indawo
Ungase bathi ukumamatheka, nobungane ngamunye indoda ajwayelekile engxoxweni ake amahlaya kuyadida - yimvelo yakho. Kodwa uma ungenayo noma iyiphi izinhloso ngenhlonipho ozakwabo emsebenzini, noma nje umngane omuhle, umuntu kungase kubonakale ngenye indlela. Ngakho uma ufuna ukugcina phakathi kwakhe nabanye abantu ibanga, cabanga kabili ngaphambi kokuba ubhalise amasu "elingenacala, 'ngothando. Akufani Nokudlala Ngothando ukumamatheka noma languid amehlo njalo ukunikeza inzalo yakho. Futhi amadoda - kuyinto esenzweni. Ngakho uma uthanda ukuba udlale ngothando, shiya leli umsebenzi ngoba kusihlwa futhi sibaphathe kumyeni wakhe.
Wena akhulume namanye amadoda mayelana nezinkinga emkhayeni
Ungakhethi umngane ubudala nabo ujwayelene namanje esikoleni, njengoba "Isazi sokusebenza kwengqondo umndeni." Ungatsheli muntu zabantu okuyinqaba nezinkinga emkhayeni. Qaphela ukuthi omunye umuntu ngempela uthanda ukududuza kwakho, futhi lokho kuyoholela ukwangiwa engadingeki. Ungacabanga ukuthi kungamanyala ayengakwazi ukuphula aphume uma owakwakho ifumana ezingalweni yomunye na? Ngakho-ke, izinkinga zethu akufanele ibekwe ngaphandle efulethini yakho. Indlela elula ukuba nginqobe ubunzima, ngokukhuluma ngokungagwegwesi nomyeni wakhe. Ezimweni ezimbi kakhulu, cela iseluleko kamama, futhi ngisho kangcono ukuba uthintane wezengqondo okhokhelwayo.
Wena wedwa nenye indoda
Kungase kubonakale ayinangozi uzibophezele isimo lapho unqume ukuba kwasemini nomuntu asebenza naye emsebenzini, noma ubuye ekuvakasheni umakhelwane bese wabe amavidiyo. Eqinisweni, uma ngempela ucabanga ukuthi uxhumana ne amadoda kuphela, ngaphandle emehlweni prying akukho lobugebengu, khona-ke unganakile uzimisele ukushintsha umyeni wami.
Ukhuluma ngani nomngane wakho womshado ngendlela engafanele
Awudingi uyavuma ukuthi abangane beqiniso ungalokothi ukhulume nomunye ngendlela engafanele ngoba amehlo nge wesithathu? Kungokufanayo uya for imibhangqwana eqinile. Ukuze ngamunye partner enye ingxenye yakhe kumele kube engcono. Abashade zibaluleke kangaka ukugcina imvelo emehlweni idumela nomunye futhi benza konke abangakwenza ukuze uvikele nomunye, kodwa hhayi ngendlela efanayo. Lena yindlela ubonisa ubuqotho beqiniso.
Wena ukuxhumana nge-inthanethi nabobulili obuhlukile
Eqinisweni, uxoxe amadoda ezingosini zengevu yimbangela ejwayelekile kakhulu okubangela umonakalo ubuhlobo. Odokotela bengqondo bathi i-Internet kuyosheshe kube ifomu evamile zokungethembeki. Lolu hlobo lokuxhumana uye wonakalisa imishado ezingaphezu kwekhulu. Musa uyibheke inethiwekhi abangane ebuntwaneni, eqinisweni, kungcono ngokuphinga okwenzekile efanayo. Uma ufuna ukuqhubeka nomshado wenu, bayakhohlwa ukuxhumana nge-Internet nabobulili obuhlukile.
Wena bakugweme ukusondelana nomyeni wakhe
Khumbula ngesikhathi sokugcina uselale umngane wakho womshado? Ingabe unayo umkhuba ukuphika womshado eduze, omema ukukhathala "ikhanda lesiguli?" obuqinile kungaba kuphela ambalwa, lapho isici olinganiselayo futhi ezingokomzimba nezingokomzwelo. Khumbula ukuthi ubuhlobo bobulili - akusiyo kuphela olokugobhoza, kodwa futhi indlela ukuxhumana nomuntu oshade naye. Futhi ngaphezulu uzobe exhunywe ngokwenyama, ukwaneliseka kulapho lapho uyoba nomuzwa ubudlelwane iyonke.
Wena ukubeka izithakazelo izingane nabazali ingaphezu kwe-izithakazelo umngane womshado
Umyeni wakho - lena umuntu okuseduze kakhulu futhi ebalulekile empilweni yakho. Futhi akekho umuntu, hhayi nabazali bakho noma nezingane kungase kubaluleke kakhulu kunaye. Yiqiniso, lokhu akusho ukuthi ungathandi namanye amalungu omndeni. Vele indoda yakho kumele qiniseka ukuthi wena umuntu obaluleke kunabo bonke endaweni yonke. Uma ucabanga ukuthi, ukuba lokuzalwa inikezwe izingane, wena manje ngokuphelele okungewakho kubo, akusiyo. Injongo lakho elingcwele ukuba umama omuhle, akekho kuzothatha.
Nokho, ngokushesha kakhulu uzophawula ukuthi ngeke usaba khona ukuzinakekela futhi bazowubona senqabe nomyeni wakhe e-ubuhlobo. ngcono kakhulu kungaba uma usebenzisa iseluleko shicilelo yethu yokuqala. Izingane kudingeka ukubona ubaba nomama zabo bayajabula ndawonye bethandana. Kanjeyana they kukhombisa impilo yabo umkhaya esikhathini esizayo. Kuyefana nasendleleni abazali bakho. Uyabathanda bangaphezi, kodwa abawona izinto eziza kuqala kuwe oyinhloko ekuphileni.
Love Triangle: Yini intombazane.
Ukufa yikuphi? Kuyini ukufa nokuthi ungesabi kanjani?
Umuntu akathandi abantu, Ubani lo?
Futhi wazi kanjani sifake "impophoma French"?
Uhlelo lokushisa lokushisa: ukubala, izinzuzo nokuqapha, ukubuyekezwa
Ngingakujabulela yini "paracetamol" ngesikhathi sokukhulelwa ekuqaleni?
Patent foramen ovale e ingane - iyimbangela yokukhathazeka?
ENT izifo izingane: izimpawu kanye nemiphumela